Solution - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
shirkadaha iyo aad u badan loo hagaajiyo maamulka raxan iyo macquul diyaarin Management System Fleet gaari dispatchingwith, oo ma aha oo kaliya si fiican u damaanad qaadaya ammaanka gaadiidka iyo qiimaha leh, laakiin sidoo kale waxay yareysaa kharashka hawl.
Waxaan kala qaybin Management Fleet galay saddex qaybood: dadka, gaadiidka iyo cargos. The "Dadka" halkan waxaa ka mid ah darawalada iyo passengers.We si fiican u maarayn karaan waxqabadka wadidda iyo markii baabuur-wadidda ee darawallada la isku darka wax ku ool ah ee technology RFID, camera iyo terminal GPS. Sidoo kale waxaan si fiican u damaanad qaadi karno badbaadada darawallada oo ay digniino iyo digniinta xaaladda degdegga ah.
Maamulka Fleet: Waxaan u helida Xog kala duwan oo ku saabsan gaadiidka ee waqtiga dhabta ah, iyo in la siiyo macaamiisha u adeega su'aal sax ah oo baabuurta location.The baabuurta la hufan diray karaa ka dib si cad u og dhaqdhaqaaqa joogo baabuurta. Sidoo kale waxaan si cad u ogaan karaa xaaladda dayactirka baabuurta. Waxaan ka dhigi kara a-qorshaynta wadada baabuurta ka hor, iyo sidoo kale ka dhigi maamulka qorshaha gaadiidka faahfaahsan.
Maamulka Hantida: La soco xaaladaha socda ee hantida mobile on jidka via technology camera, albaabka technology magnetic induction, technology iskaanka bar-code, RFIDtechnology, technology GPS, technology gudbinta wireless, iwm, si loo gaaro maamul gaarsiinta wax ku ool ah, taas oo wax ku ool ah looga fogaado kartaa in hantida qiimo leh waxaa xaday, boobay oo laga badiyay.
Hagaajinta raxan u
-oolnimada iyo faa'iidada
xilalka iyo khataraha
Function aasaasiga ah
madal maamulka 1. taageertaa socodka 10-time languages2.Real oo taariikhi ah qorshaynta review3.Route raadraaca / 4.Vehicles qorshaynta ee gobolka ka hawlgala ayaa sheegay Dabsheegaha 5.Real-time iyo warar Alarm.
Aaddinta lagama maarmaan Products Hardware
Details loo ogaado tayada, fiirsashada eryaa brand ah
Logistics Gaadiidka Management Fleet Solution
Baska Iskuulka Management Fleet Solution
Post Transport Management Fleet Solution
Qaboojiye Gaadiidka Management Fleet Solution
Taxi Management Fleet Solution